अति पुराना उपकरणबाट स्वास्थ्य जाँच गर्दै ठूला सरकारी अस्पताल – Nepali Health
अति पुराना उपकरणबाट स्वास्थ्य जाँच गर्दै ठूला सरकारी अस्पताल
२०७४ असार ३१ गते ७:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ३१ असार । उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने कतिपय उपकरण ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । त्यस्ता उपकरणको आयु औसत दुईदेखि पाँच वर्षको हुन्छ ।
वीर, टिचिङ, सिभिललगायतका अस्पतालले वर्षौं पुराना उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘दुईदेखि पाँच वर्ष मात्रै औसत आयु हुने भए पनि सरकारी अस्पतालमा पुराना उपकरण प्रयोगमा छन्,’ सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा दीर्घराज आरसीले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल महाराजगन्जमा पनि पुराना उपकरण प्रयोगमा आइरहेका छन् । अस्पतालका मेन्टिनेन्स शाखाका इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीले स्थापनादेखिका उपकरणबाटै बिरामीको स्वास्थ्य जाँच भइरहेको बताए । ‘पुराना मेसिनबाटै हामीले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
सबैभन्दा पुराना उपकरण टिचिङ अस्पतालमा रहेका छन् । यस्ता उपकरणलाई सबै अस्पतालले विस्थापन गरी अत्याधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । टिचिङ अस्पतालमा २५ वर्षदेखि अटो क्लेभ मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । यसलाई वर्षौँवर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त नभएको प्राडा लोकविक्रम थापा बताउँछन् ।
‘उपचारमा जाँदा प्रयोग हुने कपडालाई सफा बनाउन यो मेसिन प्रयोग गरिन्छ । तर, पुरानो मेसिनबाट उल्टै संक्रमण हुन सक्ने अवस्था छ । यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार ।
सरकारी चिकित्सक संघले बनायो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ ‘अर्गानोग्राम’
३७ हजार घुस लिएको आरोपमा नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख डा. यादव पक्राउ
स्वास्थ्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले हेरेन, जिल्ला स्वास्थ्यको बारेमा अर्को निर्णय हुँदै
मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग झिकेर प्रत्यारोपण गर्न बाधक के ?
ग्राण्डी अस्पतालबाट हाम फालेर बिरामीले गरे आत्महत्या
कृष्णनगर नगरपालिकाको ५ नम्बर पूर्णखोपयुक्त वडा
‘औषधिको अभावमा मान्छे मर्नुपर्ने ? कसरी हुन्छ ?’
दिनमै एक लाख कमाउँछन सरकारी डाक्टर ?